Mugovera 16 Gumiguru 2021
Zita Rekuzivikanwa Siozen inounza shanduko nyowani yekusimudzira yakakwirira hutsanana system iyo inoshandura zvakasarudzika nzvimbo yako nzvimbo, maoko nemhepo kuita iine simba hutachiona / huturu hwekudzivirira kusvibisa system. Nzira dzemazuva ano dzekuvaka dzakanakira kutipa simba riri nani uye kunyaradza, asi izvo zvinouya nemutengo. Yakasimba uye edhiza-isina zvivakwa zvinobatsira mukuvaka-zvisingaverengeke kusvibiswa. Kunyangwe kana chirongwa chekupinda mweya wekushongedza chanyatsogadzirwa uye kunyatsochengetwa, kusvibiswa kwemukati kunoramba iri nyaya yakakura. Nzira nyowani dzinodiwa.
Chishanu 15 Gumiguru 2021
Kurongedza Makambani mazhinji uye zvitoro muJapan yose anopa mupumburu wepepa rechimbuzi kune vatengi sechipo chitsva kuratidza kuonga kwavo. Iyo Michero Yechimbudzi Pepa yakagadzirwa kune wow vatengi vane yayo yakanaka chimiro, yakanakira zviitiko zvakadaro. Kune zvigadzirwa zvina zvekusarudza kubva Kiwi, Strawberry, Watermelon, uye Orange. Kubva pakaziviswa dhizaini uye kuburitswa kwechigadzirwa, chakaunzwa munzvimbo dzinopfuura makumi mashanu dzevezvenhau, kusanganisira terevhizheni dzeTV, magazini, uye mawebhusaiti, mumaguta makumi maviri nematatu munyika 19.
China 14 Gumiguru 2021
Kukwira Shongwe Iyo isingashande mvura shongwe yakatemwa neveShopping manejimendi kuti ivakezve kuti ive rusvingo rwekukwira. Kuve wepamusoro wepamhepo wakakomberedza inonyatsooneka kunze kweiyo Workhop. Iyo ine iyo inoratidzika inoratidzika pane Senezh dziva, nzvimbo yeWorkshop uye sango re pine rinotenderera. Kana vapedza zvidzidzo zvavo vadzidzi vanotora chikamu chekukwira kumusoro kune shongwe chaiko kunova nzvimbo yekutarisa. Spiral kufamba kwakakomberedza shongwe chiratidzo chezvekuwana maitiro. Uye iyo yepamusoro-soro chiratidzo chehupenyu chiitiko icho chinopedzisira chashandurwa kuita dombo rehungwaru.
Wafer Keke Kurongedza
Chipiri 12 Gumiguru 2021
Wafer Keke Kurongedza Uku ndiko kurongedza kwekugadzira keke yakaomeswa yakazadzwa nebhinzi jamu. Iwo mapakeji akagadzirwa ne tatami motifs kuti abvise kamuri yeJapan. Ivo vakauyawo nehembe yemaitiro emapaketi dhizaini kuwedzera pakapakiti. Izvi zvaiita kuti (1) iratidze nzvimbo yechinyakare moto, uye yakasarudzika yekamuri yeti, uye (2) kugadzira tumba tii mune 2-mat, 3-mat, 4.5-mat, 18-mat, uye humwe hukuru hwakasiyana. Misana yemapakeji yakashongedzwa nemadhizaini kunze kwetatami motif saka inogona kutengeswa zvakasiyana.
Mifananidzo Yemifananidzo Akakanganwa Paris mapepa matema uye chena mapikicha ekare pasi pevhu pasi peguta guru reFrance. Iyi dhizaini repertoire yenzvimbo dzinozivikanwa nevanhu vashoma nekuti hazvisi pamutemo uye dzakaoma kuwana. Matthieu Bouvier anga achiongorora idzi nzvimbo dzine ngozi kwemakore gumi kuti awane iyi yakanganikwa yakapfuura.
Only Right Here Akabata Banga China 9 Zvita
180º North East Riini Chitatu 8 Zvita
Ballo Chinotakurika Mutauri Chipiri 7 Zvita
Zita Rekuzivikanwa Kurongedza Kukwira Shongwe Chess Inonamira Keke Kurongedza Wafer Keke Kurongedza Mifananidzo Yemifananidzo